Oslo (/ ɒzloʊ / OZ-loh;  Noorway: [²uʂlu] (ku dhawaad ​​codka dhegeysanaya), marmar [²uslu, uʂlu]] waa caasimadda iyo magaalooyinka ugu badan ee Noorway. Waxay ka kooban tahay degmada iyo degmada. Waxaa la aasaasay sanadka 1040, waxaana loo asaasay kaupstad ama meel ganacsi 1048 xaruntii Harald Hardrada, magaaladu waxay sare u kacday hoggaamiyaha kiniisadda 1070 iyo caasimadda Haakon V ee Norway ilaa 1300. Isbahaysiga shakhsi ahaaneed ee Danmark laga soo bilaabo 1397 ilaa 1523 iyo mar kale laga bilaabo 1536 ilaa 1814 iyo Iswiidhan laga bilaabo 1814 illaa 1905 ayaa hoos u dhigtay saamaynta. Ka dib markii lagu gubay dab kacay 1624, muddadii xukunka King Christian IV, magaalo cusub ayaa loo dhisay Akershus Fortress oo magaceeda lagu magacaabo Christiania ee sharafta boqorka. Waxaa loo asaasay degmada (formannskapsdistrikt) 1 januari 1838. Magaca magaalada waxaa loo soo diray Kristiania laga bilaabo 1877 iyo 1897 oo ay u kala qaybsamayeen dawladda iyo degmooyinka. Sanadkii 1925 waxa loo magacaabay Oslo.
Oslo waa xarunta dhaqaalaha iyo dowladda ee Norway. Magaaladu sidoo kale waa xarun ganacsiga Norway, bangiyada, warshadaha iyo maraakiibta. Waa xarun muhiim u ah warshadaha badda iyo ganacsiga bada ee Yurub. Magaaladu waxay ku taallaa shirkado badan oo ka tirsan qaybta badda, qaar ka mid ah kuwa ka mid ah shirkadaha maraakiibta caalamka ee ugu badan, markabka iyo bakhaarada badda. Oslo waa magaalo tijaabo ah oo ka mid ah Golaha Yurub iyo Barnaamijka magaalooyinka ee dhaqamada kala duwan ee Yurub.
Oslo waxaa loo tixgeliyaa magaalo caalami ah waxaana lagu magacaabaa "Beta World City" ee daraasaadka ay qabatay Kooxda Globalization iyo Kooxda Daraasaadka Dunida ee Caalamka iyo Shabakada 2008.  Waxaa kaalinta koowaad ku jirta tayada nolosha ee ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee yurub ee magaalooyinka Yurub ee mustaqbalka 2012 warbixinta by fDi magazine.  Daraasad ay samaysay ECA International sannadkii 2011 waxay Oslo ka dhigtay magaalo labaad oo ugu qaalisan adduunka oo loogu talagalay kharashka nolosha ka dib markii ay Tokyo soo gashay. Sannadkii 2013 Oslo wuxuu ku xiran yahay magaalada Melbourne ee magaalada Melbourne oo ah magaala afaraad ee ugu qaalisan adduunka, sida ay sheegtay Waaxda Dhaqaalaha ee Dhaqaalaha (EIU) ee Qiimaha Dunida ee Daraasada Nolosha.
Laga soo bilaabo 1 Luulyo 2017, degmada Oslo waxaa ku nool dad gaaraya 672,061, halka dadka reer magaalka magaaladana ay ahaayeen 942,084.  Aagga caasimadda waxaa lagu qiyaasay dad lagu qiyaasay 1.71 milyan.  Dadka ayaa kor u kacay heerarka rikoodhka horaantii sannadkii 2000, taas oo ka dhigtay magaaladii ugu weynayd ee ugu weynaa ee Yurub waqtigaas.  Koboca Tani waxay ka kooban tahay qaybta ugu badan ee socdaalka caalamiga ah iyo heerarka dhalashada ee aadka u sarreeya, laakiin sidoo kale ka soo haajiridda gudaha dalka gudihiisa. Dadka soo galootiga ah ee ku nool magaalada ayaa si dhaqso badan u koraaya
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Oslo.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Oslo&oldid=218144"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Oktoobar 2021, marka ee eheed 21:31.